Gaari walxaha qarxa siday oo maanta lagu soo bandhigay magaalada Gaalkacyo (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Gaari walxaha qarxa siday oo maanta lagu soo bandhigay magaalada Gaalkacyo (SAWIRO)
Ciidanka nabad-sugidda maamulka Puntland ayaa maanta soo bandhigay gaari walxaha qarxa siday iyo darawalkii gaarigaasi waday oo dhawaan lagu qabtay duuleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Gaarigaan lasoo bandhigay oo noociisu yahay Candha-Meedlaha ayaa la sheegayaa in lagu qabtay duuleedka magaalada Gaalkacyo kadib marki uu kasoo amba baxay magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Darawalka gaarigaasi oo lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Xasan ayaa gacanta lagu dhigay xilli uu doonayay inuu gaarigaasi geliyo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Wuxuun darawalkaasi sheegay in gaarigaasi uu leeyahay nin lagu magacaabo Maxamed Siciid Cabdi Dhiif oo ku nool magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Dhinaca kale, saraakiisha nabad-sugidda maamulka Puntland oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in baaris kadib la ogaaday in gaarigaasi waday walxaha qarxa la doonayay in lagu qarxiyo shacabka Puntland.
Saraakiishaasi ayaa sidoo kale sheegay in darawalkii waday gaariga iyo sidoo kale milkiilihii gaariga lahaa gacanta lagu dhigay islamarkaana dhawaan labadooda la xukumi doonno.